Xaqiiqooyinkii laga diiwaan geliyey kulankii Arsenal iyo Watford… (Maxaa laga bartay goolashii Sanchez, Iwobi iyo Bellerin?) – Gool FM
>- Alexis Sanchez ayaa dhaliyey goolkiisii ugu horreeyey Premier League, tan iyo markii uu gool ka dhaliyey guushii ay Arsenal ka gaartay Manchester United 04 bishii Oktoobar sanadkii 2015.
>- Alexis Sanchez ayaa markii ugu horreysay gool dhaliyey mid kalena caawiyey kulan ka tirsan Premier League tan iyo bishii April sanadkii 2015, markaasoo goolna uu ka dhaliyey mid kalena ku caawiyey kooxda Liverpool.
>- Arsenal ayaa haatan dhalisay 6 gool siddeedii kulan ee ay garoonkeeda ku ciyaartay tartammada oo dhan.
>- Watford ayaa kaliya guul gaartay hal kulan, lixdii kulan ee ugu dambeeyey Premier League oo ay ku soo ciyaareen meel ka baxsan garoonkooda, (1 guul, 1 barbaro, afarna waa laga badiyey).
>- Alex Iwobi ayaa goolal dhaliyey labo kulan oo xiriir ah, kaddib markii uu ku guuldarreystay in uu shabaqa haleelo 13-kii ciyaar ee ugu horreeyay oo u ciyaaray Arsenal.
>- Dhammaan saddexdii gool ee Héctor Bellerín u dhaliyey Arsenal Premier League ayaa yimid, iyadoo lagu ciyaarayo garoonka Emirates ee kooxdiisa.
>- Hector Bellerin ayaa toos ugu lug leh 4 gool saddexdii kulan ee ugu dambeeyey oo uu Arsenal u ciyaaray Premier League, hal gool waa uu dhaliyey saddex kalena waa uu caawiyey.
L'Equipe oo amaantay Zinedine Zidane kadib guushiisii ugu horaysay ee uu ka gaaray Barcelona!